Namuhla, sinesithakazelo kwesikwenzayo imibhalo ukuze ninciphise efulethini. Eqinisweni, kunzima hhayi ngakho ukuqagela ukuthi yini edingekayo kithina. Nokho, akubona bonke izakhamuzi bayasazi kulolu hlu. Ngakho, unelungelo ukwala ebanjwayo. Hhayi umphumela emnandi kunazo, akunjalo? Ngakho ake ngokuphelele uhlole uhlu oluphelele lwazo zonke izinto okudingeka ukuthi ukuthola imali wombuso e ikhomishana ukuthengwa nokudayiswa ingcebo. Esimweni sethu - kuba efulethini. Noma indlu / umhlaba. ukulungiselela Proper ziyodamba kwinqubo kuya esiphezulu.
Ukwenza lo imali yentela ngoba ukuthenga indawo - akuyona umsebenzi onzima kangaka. Mhlawumbe abaningi le nqubo yaziwa. Uma nokukulungiselela kahle, khona-ke ayikho inkinga, ngeke esabe. Bamane akazange kuphakama.
Incwadi yokuqala, okuyinto edingekayo ukuze sithole inzuzo intela - kungcono yakho ungubani. Ungasebenzisa noma isiphi idokhumenti elifanayo, kodwa njengoba umkhuba imibukiso, kungcono ukukhombisa iphasiphothi. Futhi ikhophi yaso. It isetshenziswa lonke uhlu wamaphepha kunesidingo. Uqinisekise liyadingeka.
Mhlawumbe, nale dokhumenti, akunankinga. Ngemva ipasipoti Russian kumelwe ngaso sonke isikhathi nawe. Kuyinto le dokhumenti kuhlala kudingeka zonke intela ukuthengiselana. Kukhumbule lokho.
Yini okulandelayo? Imibhalo sidonsa ngesikhathi efulethini kuyize ngaphandle kokwenza isicelo olufanele. Okungukuthi, ngempela kufanele athumele isicelo ngokubhalela iziphathimandla zentela. Ngaphandle isitatimende ungawenzi nokudoswa.
Wenziwe kulula futhi kulula - vele ucacise imininingwane yakho kanye nedatha, kanye isizathu imali. Esimweni sethu kuba ukuthengwa ifulethi. Yilokho. Ngemva kuzodingeka ukuba asayinde, bese ulinamathisela ipasipoti namanye amaphepha.
Nakani esinye isici esibalulekile - embhalweni isitatimende futhi esibekiwe imininingwane ye-akhawunti yasebhange lapho uzobe uthole izimali. Uma uphuthelwe leli phuzu, ungakwazi ukulinda zokwala iziphathimandla zentela imali imali.
Yini enye ingasiza? Ukwenza imali yentela ngoba ukuthenga indawo kule saziso sihlanganisa lento ngoba ukulungiswa entela. Ngaphandle-ke, futhi, abakwazi ukukhokha izintela noma ukuze siphinde sithole ingxenye yemali esetshenziselwa.
Ifomu ukuthi sidinga - 3-PIT. Ukwenza awusebenzi ibange inkathazo ukuze izakhamuzi. Ungasebenzisa isimiso esikhethekile, ezosiza ukwenza lesi simemezelo, futhi ngokugcwele ukukupheka zokunyathelisa.
Kwasebenza kuphela yasekuqaleni. Amakhophi 3-PIT engamukelwa yizo iziphathimandla zentela. Uma udinga idokhumenti "bona" ncamashi, nje uyiphrintele ngeduplikhethi. Yilokho. Qaphela ukuthi amakhophi amafomu entela wena umane ngeke ngisho ukukhuluma. Le mithetho asethwe eRussia ngaleso sikhathi.
Uma siqhubekela phambili. Imibhalo susa ukuze efulethini - umbuzo akuyona eziyinkinga kunjalo, uma uzilungiselele kahle. Phela semaphepha ngenhla zilungele, kufanele ngandlela-thile ukufakazela imali yabo. Ukuze wenze lokhu, kukhona enye inkomba. Ibizwa ngokuthi 2-PIT.
Uma "ku", kuyodingeka bagcwalise ngokwakho. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa isicelo esifanayo, lapho obukhona entela 3-PIT. kuphakama Azikho izinkinga ekhethekile ngesikhatsi kokuhlinzwa.
Noma kunjalo, iningi izakhamuzi abasebenza ngoba esethole ongcono. Futhi kule divayisi iwalondoloze kusukela emsebenzini wamaphepha ezingadingekile. Isikhombo 2-PIT Kumelwe unike umqashi wakho. Buza ukuthi uMnyango ezimali lenkampani lapho usebenza. Ayikho inkinga, njengoba umthetho, asivelanga lapha.
Kodwa, sicela uqaphele - imibhalo ukuze kubanjwe u ifulethi, kuba inkomba 2-PIT, kanye entela kufanele sigcwaliswe yokuqala. Okungukuthi, noma yimuphi nekhophi yayo, ngeke zamukelwe. Ngakho qiniseka ukuthi 2-PIT isetjentiswe kuphela yasekuqaleni.
Yini enye? Manje thina uqhubekele imibhalo sina kakhudlwana kuwe futhi abaluleke. Into wukuthi konke lokhu ephepheni - okubizwa ngokuthi standard. Ngoba noma yisiphi imali yentela basuke wakhonza iziphathimandla zentela. Kodwa-ke esimweni ngasinye has uhlu ayo kwemibhalo.
I sokubuyiselwa imali yentela ngoba ukuthenga flat / indlu / umhlaba ngeke kutholakale uma ngandlela-thile bodokotela ngeke akuqinisekise ukuthi idili. Uqinisile indlela yokukwenza kahle? Udinga inkontileka yokuthengisa egameni lakho. Kubalulekile ukuthi wena wawusohlwini umthengi. Kungenjalo, ebanjwayo zizokwenziwa.
Kunikezwe ikhophi eqinisekisiwe. Uma ufuna ungakwazi ukunikeza original futhi ushiye ngokwakho ikhophi yesivumelwano yesibili. Kodwa khumbula - nokudoswa akunakwenzeka ngaphandle kwalo. Okwamanje ke akakubangeli izinkinga ikakhulukazi izakhamuzi. Phela, ukuthenga nokuthengisa ngaphandle inkontileka nhlobo azinakugcinwa.
Udinga ukuthi kubanjwe lapho uthenga ifulethi? Imibhalo, njengabangaqondakali kungase kuzwakale, akukwazi ngokuqondile kusuka kuwe. Empeleni, abanye kufanele uthole isikhathi esithile ezimweni ezithile. Ngokwesibonelo, kumayelana isitifiketi ubunikazi.
Kuzoba ngeke ngokushesha emva ukuthengwa ingcebo, kodwa ngemuva kwesikhathi esithile. Cishe ngemva kwenyanga kwenzeke lokho kuthengiselana kwabo. Ngakho ngiphuthume imali yentela akudingekile. Uyoba nesikhathi esanele kokuqedwa kwalo.
Isitifiketi kobunikazi kungenziwa inikezwe njengoba yasekuqaleni futhi ikhophi idokhumenti. Kungcono ukusebenzisa ukhetho lwesibili. Ngemva isitifiketi impinda uyophinde ube ukuthola, uma ulahlekelwa original. Kanjalo-ke, le dokhumenti kuyohlale nawe. amakhophi iziphathimandla zentela Certified aphoqelelwe ukuba bathathe kuwe.
Imibhalo ngoba izimali ezihlukahlukene ezidonswayo. Kodwa nakanjani, zonke izakhamuzi kumelwe ngandlela-thile ukufakazela izindleko zabo. Yiqiniso, ngaleso sikhathi basisize izikweleti namarisidi. Kungcono ukuletha yokuqala yalo, futhi ushiye ikhophi uqobo. Noma qinisa impinda futhi isetshenziswa entela.
Ngokuvamile, nale isikhashana, futhi, ayikho inkinga. Ingabe watch out for iqiniso lokuthi imiyalo yokukhokha banikwa idatha yakho. Kuphela umuntu bubalwa yomkhokhi inelungelo kubanjwe. Futhi akukho ngaphezulu. Lokho akunakusho nidle, nasekuseni inkokhelo ukuze inkontileka, kanye Declaration banikwa izakhamuzi ezahlukene. Lokhu abakwenzayo akukho semthethweni. Uma Esimeni esinjalo, ungenalo sokubuyiselwa imali yentela ngoba indlu (isinxephezelo) zizokwenziwa. Intela kuzokuphela, futhi imali ngeke usakwazi ukubuyela.
Empeleni, konke imibhalo ukuze ninciphise efulethini. Nokho, ngokuvamile mhlaba lutholwa e mortgage. Okudidayo ukuthi, kodwa ngisho ne Esimeni esinjalo, unelungelo ukubuyela izimali esichithwa ukuthengwa kwezindlu.
Engingakusho nje anezele ohlwini olungenhla kwemibhalo izibambiso ezithile. Futhi akazange kukhona izinkinga. Noma kunjalo, okungukuthi bangaki izakhamuzi bayaqinisekiswa ukuthi baye bathola kanjani esimweni esinjalo.
Kumele ube ukubuza? Okokuqala, inkontileka mortgage. Wayedinga noma yokuqala noma ikhophi yaso eqinisekisiwe. Indlela yesibili lijatshulelwa izakhamuzi bayindlala kakhulu. Ukwehluka - uma ngenxa yesizathu esithile, ekugcineni kwahlaluka ukuthi amakhophi amabili wokuqala wesivumelwano mortgage.
Okwesibili, kuzodingeka namarisidi eqinisekisa ukukhokha inzalo mortgage. Nalapha futhi, bonke ngendlela efanayo lapho sizisebenzisa - noma amakhophi emibhalo yokuqala. Into esemqoka ukuthi idokhumenti ukukhokhelwa kahle ukuthi banikwa, hhayi omunye umuntu. Yilokho lula kangaka, ungathola imali yentela ngoba ifulethi endabeni ethile.
Yini enye okudingeka ukwazi ukwenza imali emuva lapho uthenga impahla akanayo izinkinga? Ngokwesibonelo, isikhathi, lapho kufanele uhambe uyokhonza kanye ukuqoqwa wonke amadokhumenti. Njengoba umkhuba ubonisa, uma nje ukuthatha design ebanjwayo kungaba ngomumo ngaphakathi 1.5 months ukuvakasha emagunyeni intela. Omude kunayo yonke owake ezingaba ulinde kuphela - lolu daba kwesitifiketi isihloko egameni lakho.
Isicelo ngokwayo kubhekwa isimemezelo cishe izinyanga ezingu-2. Emva kwalesi sikhathi, uzothola impendulo ekwenqabeni bentela sika sokubhalisa noma imvume ebanjwayo. Futhi, njengoba umkhuba imibukiso, ngisho inyanga noma ezimbili nesitatimende eshiwo uya imali ukubeka. Ngakho, ngokwesilinganiso, inqubo yokubhalisa kanye kokuthola emhlabeni izinyanga eziyisithupha. Kodwa ungafaka entela ngaphambi kokuphela kwesikhathi intela. Okungukuthi, kwaze kwaba ngo-April 30 unyaka ngamunye. Ngaphezu kwalokho, ngokuvumelana kwemithetho yamanje, unelungelo lokuthola imali ebanjwayo for the last 3 iminyaka. Ngakho akukho ezisheshayo.
Into eyodwa ngaphezulu - uma impesheni, kuzodingeka ukuba enze ukuba wonke amadokhumenti ngenhla, ngisho isitifiketi impesheni (ikhophi) kanye nesitifiketi ezingasetshenziswa ukuqinisekisa izinzuzo zakho, uma ikhona. Akukho nzima kakhulu, ikakhulukazi uma wazi uhlu oluphelele wonke amaphepha adingekayo ukuze ebanjwayo.
Yini intela amaphasela abavela kwamanye amazwe e-Russia, e-Ukraine, eBelarus, Kazakhstan? Yini amaphakheji intela
Ifomu 2-TP (imfucumfucu): Ukuze ukugcwaliswa zokukhokha
Ukubeka ukulele: yonke imininingwane
Obidos, Portugal: izikhangibavakashi, isithombe, ukubuyekezwa
Indlela ukuqeda le amadevu
Yini okudingeka uyenze ukuze uthole Pudding irayisi - okumnandi, ezindlebeni ngeke udonse?